Inona no fomba tsara indrindra mba hihaona amin'ny zavatra zazavavy any Londres, ho an'ny fifandraisana matotra
Inona no fomba tsara indrindra mba hihaona amin’ny zavatra zazavavy any Londres, ho an’ny fifandraisana matotra
Aho Britanika, fotsy ny lehilahy izay efa nandany ny ankamaroan ny fiainako any Kanada fa ankehitriny monina any Londres. Nisara-bady aho fa tsy nanan-janaka izy ireo, ary te hihaona tsara poloney zazavavy. Aho, kilao, fa mety, ny matihanina, mahalala fomba, manam-pahaizana sy mahomby. Aho hanao toy izany zavatra kolontsaina dia mafy mifantoka amin’ny fianakaviana. Izaho koa manao Katolika ary fantaro fa ny ankamaroan’ny poloney ny olona ny Katolika.)Mahita ny lisitry ny zavatra toeram-pivarotana any Londres sy mandehandeha any ny iray tamin’izy ireo, ny cashiers ny ankamaroany vehivavy u mety hahazo ny soso-kevitra sasany avy amin’izy ireo aho tonga saina fa zavatra vehivavy tsara (mifototra amin’ny info). Niezaka aho mba hitsena azy saingy tsy nisy vokany. Nefa toa miafina. Tiako ny zavatra vehivavy. Fanoitra — tsy maintsy manala baraka ny olona. Raha manana olana, dia tsy maintsy manatsara izany noho ny fanompana ny olona. Dia izany ny heloka bevava, mba hihaona tsara ny olona eto an-tany? levy BR. Ny zavatra mampalahelo ny valin-mahalala fomba rangahy. Ianao ve naniratsira ny olona satria tsy misy antony. Tsy misy olana ny zavatra toy izany mandrakizay miaraka aminy nanao hoe tiako ny zavatra vehivavy. Ianao fotsiny ny maka teny an-dalana izy, nataony raha ny s mazava tsara ny zavatra izy raha ny marina dia midika hoe. Koa fantatrao ve fa mbola tsy maintsy ny olona izay raha ny marina dia avy amin’ny foko any Afrika sy Moyen-Orient. Noho izany, ianao ve naniratsira olona avy izay ny kolontsaina maha-izy azy ao ambadiky ny fotoana izay ll hahita azy eo amin’ny toerana toy ny Dubai izay be dia be ny olona tsy afaka manonofy ny handeha tsy ho fialan-tsasatra. Ianao re ny ratsy olona, ary tokony hieritreritra talohan’ny miteny Koa nahoana izy ireo no mety hahazo naniratsira aho raha milaza ny marina, fa izy ireo hitondra ny vehivavy ihany koa izy ireo hitondra ny rameva. Marina mampalahelo dia be. Ka nahoana no tsy MITSAHATRA manao izany fa tsy nanafina ny fahamarinana. Hi ry zalahy, aho ny taona Londoner ny middles atsinanana lova mitady zavatra vadiny. Na dia izany aza, izaho no mahomby sy ny manokana ny raharaham-barotra, izaho no mbola tsy nahita ny tsara kokoa ny antsasaky. Raha fantatrao ny zavatra tovovavy ny taona, manga maso, blond volo, kely orona sy ny kely plump, miangavy mba hifandray amiko amin’ny fanaovan-tsoa. Mahatsiravina ity zazalahy s (I don t milaza olona) ny toe-tsaina mba hifidy ny tovovavy tahaka izy ireo misafidy iray tapa-fanaka ao amin’ny Ikea s io. Tanteraka adala mba hanapaka ny hafa zom-pirenena, ny loko ny volo maso sns. Nahoana ny didim-pitsarana nivoaka ny tsara sy ny mendrika eo an-toerana zazavavy? Madio immaturity. Sam: firy taona ianao sy ny fomba maro ny vehivavy no tena fantatra. Tsara, nisy zatovo avy any Chicago. Eny, ny tovolahy dia ho ankizilahy ary avy eo izy ireo ll hitombo sy hahita ny tena fiainana. Tsy mila valiny, eritrereto ho tahaka izany, raha ianao no ho nangataka firy taona ianao sy ny fomba maro ny olona no manana tena fantatra. tsy tena tsara ny fifanakalozan-dresaka momba ity forum ity, dia ny hevitrao. Rehetra azonao atao dia ny manao ny vinavina tsotsotra, ary tsy misy fisalasalana ianao, dia mieritreritra anao dia somary mazava. Salama: vao mba fototra iray ny heviny amin max na tao amin’ny tena ankamaroan’ny toe-javatra, dia misy idiran’ny resa-jaza sy adala. Raha hafatra nosoratan ny tanora, dia mety hahatakatra fa raha avy amin’ny olon-dehibe, izany no tena mampalahelo. Firy ny vehivavy avy tany Polonina sy ny avy any amin’ny toeran-kafa dia izy tenany mihitsy no fantatra.)? Ny s ny heviny manokana, jaza.
Fa indray ianao dia hanao toy ny sain-jaza. Noho izany, inona no fialan-tsiny. ianao misy ny tanora. Salama: ianao vao milaza noho ny mifamaly. Aza t lazao amiko izay niorina ny heviny amin izany (max na ny toe-javatra) dia mahatonga izany ho matotra, ary na dia ara-tsiansa. Ary eny, izany dia mampiseho immaturity na ny tani-hay ny fahadalana. Salama: eto, miaraka aminao aho.). Tsy afaka ny hiresaka momba ny rehetra ala, amin’ny fijerena amin’ny hazo iray ihany). Niorina ny heviny momba na ny toe-javatra dia tsy ilaina intsony ny milaza fa tsy tena.
Fantatro fa tokony tsy mandoa ny saina ho toy izany dikany izany, fa ho toy izany ny vahoaka, dia tokony ho nilaza fa ny fisainana toy izany tanteraka adala sy tsy misy ilàna azy. M ny taona American lehilahy ny fianarana any Londres, aho, ka mitady ny hihaona sasany tsato-kazo raha mbola eto aho. Na dia teraka sy lehibe tany Amerika, dia miteny akaikin’ny mahafehy tsara ny zavatra sy hanao zavatra maha-olom-pirenena amin’ny alalan’ny ray aman-dreniko. Na izany aza, mbola tsy tena nandany fotoana be loatra ao Polonina (herinandro na roa isaky ny taona vitsivitsy, max), ary te-hahafantatra izay ny ampahany ny lova tsara (ny koa, satria niala an-trano aho taona iray lasa izay ny zavatra efa naka kosa ny ratsy satria izaho dia tsy misy intsony miteny azy isan’andro amin’ny ray aman-dreniko, ary tena tsy te-ho very ny fahaizany miteny azy). Izany, aho manontany tena hoe aiza tany Londres aho, afaka hahita sy hiresaka ny tsato-kazo. Izaho ve hatreto dia niezaka ny tarika s poloney fiaraha-monina, kanefa izy ireo zara raha hihaona izaho sy hita ve ny mpikambana ao aminy mba ho tsy cliquey (izy rehetra mahafantatra ny tsirairay avy Varsovie, ary tena mafy raiki-pitia, bebe kokoa aho ny te hahafanta-javatra ho azy ireo amin’ny maha-Amerikana izay nahay miteny poloney). Aiza ve ianao ry zalahy fahazoan-dalana, mijery. Izaho ve ihany koa eritreritra momba ny fanofana fisaka ao Varsovie fahavaratra ity fa angamba herinandro iray na roa (Airbnb) mba hanandrana ary dia miroboka tanteraka ao anatin ny kolontsaina. Atao tsato-kazo ao Polonina manana tsara ny hevitry ny Amerikana. Fanoitra ianao indray no manompa ny Eoropeana sy manambany ny toe-javatra amin’ny alalan’ny fampitahana azy amin’ny Afovoany Atsinanana ny fiaraha-monina (rameva varotra) ary mahatsiaro ho tsy misy henatra na inona na inona. Ny s mazava tsara tarehy ianao indray ny Israeliana iray noho ny ohatra nasehon ny fihetsiny. Ankehitriny, izany Britanika rangahy ny fitadiavana ny anarana ramatoa fa mety ho avy vadiny dia ampahany ny Eoropeana ny olona. Ny zavatra ataontsika eo amin ‘ny olona tao amin’ ny firenena niaviany aza tsy tokony ho ny misy ahiahiny momba ny Levantine. Isika Eoropeana dia ny iray olona maro ny sampana sy ny manokana ny fahasamihafana izay ho antsika
← Ahoana no hiditra chatroulette tsy manome ny finday isa - Bodybuilding Sehatra fiadian-kevitra
Hiresaka Ny Ho Maimaim-Poana Tsy Misy Fisoratana Anarana →